Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Oo Amar la dul-dhigey – Radio Baidoa
Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Oo Amar la dul-dhigey
By Webmaster	 On Feb 19, 2020
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Shuute oo la hadlayay askar kusoo biirtay Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed ayaa ku amray inay wax ka bedelaan dhaqan xumada ka soo yeerto xabsiyada Dalka.
Waxaa uu sheegay in Xabsiyada qaarkood aysan ka jirin hab dhaqankii loo baahnaa,isla markaana qaar kamid ah dadka xukunsanayaasha ee Xabsiga ku jira ay heystaan Taleefoono sidoo kalena ay isticmaalaan Barahada Bulshada.
“Taliyeyaasha Xabsiyada waxaa laga rabaa inay wanaajiyaan dhaqanka dadka ku jira Xabsiyada oo ay waajibkooda gutaan,hadii aysan taasi dhicin dadka xiran waxaa laga yabaa inay sii wataan wixii markii jore loo soo xirey oo ay kamid tahay fikirka Al-Shabaab ayuu yiri”Gudooiye Shuute.
Waxaa uu hadalkiisa intaas ku daray in Taliyihii aan noqon mid dadka Xabsiga uu Madaxda ka yahay ku xiran aan barin akhlaaqda sidoo kalena aan koontoroolin aysan u aqoon taliye balse uu yahay mid madax ka ah Xero ay maamulaan Xubno ka tirsan waxa loogu yeero Argagaxisada.
Hadalka Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Shuute ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli ay jirtay warar soo baxayay oo sheegayay in qaar kamid ah Maxaabiista ku xiran Xabsiga Dhexe ee Xamar ay Gudaha Xabsiga ku dhex heystaan Taleefoono iyo Agab kale oo ka mamnuuc ah Maxaabiista.
RW Khayre oo kormeeray Xarunta Dhexe Ee Xukuumadda oo la dhisayo